Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-8 kwaba-10 baseMelika ixhasa iiPasipoti zokugonya
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-81.8% yabantu baseMelika bathanda iiPasipoti zokugonya
Uluvo lwepasipoti yokugonya ikhule ngokucacileyo ekuthandeni.
Olu phando lubandakanya abantu abangama-997 phesheya kwe-US ababebuzwa imibuzo eyahlukeneyo enxulumene neepasipoti zokugonya.
I-Baby Boomers yeyona nto incinci yokuxhasa iipasipoti zokugonya.
Ama-50.9% ewonke abaphenduliweyo baxela ukuba kunokwenzeka ukuba bahambe baye ekhaya kunye neemfuno zepaspoti yokugonya.
Iziphumo zophando lwakutshanje lokugonya zityhila indlela abantu baseMelika abavakalelwa ngayo ngezithintelo zokuhamba ezahlukeneyo ezinxulumene nobhubhane we-COVID-19.
Ngengxoxo eqhubekayo ejikeleze inkululeko yomntu kunye nokukwazi ukuhamba ngaphandle kweziphazamiso kwilizwe lonke, uninzi ngoku lukholelwa ukuba ubungqina bokugonywa kufuneka bube yimfuneko.
I-81.8% yabantu baseMelika baphonononge inkxaso yombono wePasipoti yokuGonya, nge-Baby Boomers yeyona nto incinci ukuxhasa le ngcamango.
Uphando luye lwabonisa ukuba sisiphi isizukulwana esinokuthi singavumelani naso ipaspoti yokugonyas nendlela abavakalelwa ngayo abesilisa nabasetyhini malunga nomcimbi.
Uluvo lwepasipoti yokugonya ikhule ngokucacileyo ekuthandeni. Kunye City New York kunye namacandelo e California ngoku ukugunyazisa ubungqina bokugonywa, kunye neenkampani ezinkulu ezinje ngemizila yeenqanawa zaseNorway, akunakuphepheka ukuba ezinye iidolophu, amazwe, kunye neenkampani ziya kuqala ukwenza okufanayo. Kwaye nangona amanye amazwe afana neFlorida kunye neTexas beyekisile iipasipoti zokugonya, uluntu ngokubanzi luyaqala ukuqhela kolu luvo.
Yenziwe phakathi kukaJuni 2-3, uphononongo lubandakanya abantu abangama-997 ngaphesheya kwe-US ababebuzwa imibuzo eyahlukeneyo enxulumene iipasipoti zokugonya -Uchazwa “njengoxwebhu olubonisa ukuba ugonyelwe i-COVID-19.” Babuziwe nangezinto abazikhethayo ezinxulumene nezithintelo ngokubanzi zesibetho esihamba nendyikityha yokufa, abemi abaphononongiweyo bamele uluhlu lwabantu kubandakanya isini (indoda / isetyhini), isizukulwana (I-Baby Boomers / Isizukulwana X / Millennials / Isizukulwana Z), kunye nabo sele begonyiwe ngokungagonywanga.
Uninzi lwabaphenduli beliqhelene nekota ipasipoti yokugonya, phantse iipesenti ezingama-82 bechaza ukuba ngoku bayalixhasa uluvo ngendlela enye okanye enye. Ezi ziphumo zibotshelelwe kubudala nakwisini, kunye nabasetyhini iipesenti ezisi-7 kunokwenzeka ukuba baxhase iipasipoti zokugonya kunamadoda. Phakathi kwabangagunyaziswanga, amadoda ayekhuthazeka kakhulu ukuba agonywe ngokusekwe kuthintelo lokuhamba kunabafazi.